Malunga nathi -Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd.
I-LINQING XINRI PRECISION BEaring CO., LTD yintsapho ekhethekileyo yokuthwala umenzi ukusukela ngonyaka ka-2006. Ifilosofi yethu: ukuzuza ukuthembeka ngokunyaniseka, ukuphumelela ngomgangatho, ukuphuhlisa ngokwenza izinto ezintsha, nokwenza amathuba ethu ngomoya onomdla.
Ezi mpawu zisisebenze kakuhle, ukufumana iXRL igama elomeleleyo phakathi kwamaqabane anyanisekileyo kunye nabathengi. Ngenxa yoko, i-XRL CO., Inentengiso esekwe kakuhle kodwa ekhula ngokukhawuleza kunye nokunikezelwa kwenethiwekhi, ngaphakathi nangaphandle.
Ngeentengiso zonyaka ezingaphezu kwe-US $ 150 yezigidi kunye namandla asendlini angaphezulu kwezigidi ezingama-7000, kumaziko afikelela ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zeenyawo zenyawo, i-XRL ngomnye wabavelisi abaphambili behlabathi. Ngapha koko, i-XRL sele ithengisiwe kumazwe angaphezu kwe-120 kwihlabathi liphela. Nokuba zezolimo, ukuveliswa kwamalaphu, ukumbiwa kwemigodi, ukuprinta usetyenziso olwahlukeneyo kwizikhululo zeenqwelo moya, kwiinkqubo zokumisa umoya, ukuhambisa izixhobo, isikhululo samandla senqanawa, ithoyi okanye izixhobo zoNyango, iMoto, iXRL ayibonisi nto ingaphantsi kweyona ndawo iphakathi yexabiso eliphambili lentengiso. . Okwangoku, i-XRL ikwaphawulwa nge-notch ephezulu, ephendulayo, nge-24/7/365 inkonzo-zonke ii-imeyile kunye ne-voicemails ziphendulwa ngaphakathi kweeyure ezintandathu, ziqinisekisiwe!
Inkonzo elungileyo emva kokuthengisa: (iwaranti esemgangathweni yeenyanga ezili-12, imali inokutsalwa okanye ibuyiselwe imali ukuba kukho ingxaki esemgangathweni phantsi kwimo yesiqhelo yokusebenzisa).
Inkonzo ye-OEM / eyenziwe ngentando yamkelwe.
Iiyure ezingama-7X24 ngomnxeba okanye ngenkxaso yetekhnoloji ye-intanethi simahla.
(1) Sinezixhobo zokuqala zokuvavanya ukukhangela iiparitha ezahlukeneyo zedatha kunye nokulawula umgangatho wokuthwala.
Nanini na xa iibheringi kufuneka zibhaqwe kuqala ukuba umgangatho ufaneleka kwaye ukuthwala okungafanelekanga kuya kususwa ngokuthe ngqo.
Ke sinokufumana ukuthembela kumthengi omkhulu, kwaye sibabonelele iminyaka eliqela.
(2) Sinezakhono zethu ze-R & D, ukunceda abathengi ukusombulula ingxaki yeebheringi ezingekho semgangathweni.
Sinako ngokweemfuno zabathengi ukutshintsha amanqaku abo.
(3) Ixabiso, ukuveliswa kwethu kuqinisekisa ukuba amaxabiso ethu kwiChina ayakhuphisana.
Kungcono kuwe ukuba uthelekise amaxabiso kunye nomgangatho phakathi kwabathengisi.
Kodwa wonke umntu uyazi ukuba awunakuthenga iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ngexabiso eliphantsi,
kodwa imveliso yethu ngowona mgangatho uphezulu ukuba usebenzisa ixabiso elilinganayo.
(4) Umgangatho wokuthwala i-XRL: ungaphezulu kwe-ISO esemgangathweni: 9001 kunye neGost.
Siye automated ngokupheleleyo umgca wemveliso kunye imigca ibandla izixhobo oluzenzekelayo ngokupheleleyo uvavanyo wich yenza umgangatho iibheringi ngqo ngqo. Senza iibheringi 100% kuvavanywa.
Ithekhnoloji yokuqengqeleka ebandayo eyahlukileyo yenkqubo yokujika ephucula amandla okuphatha amakhonkco kunye nobomi bokuthwala ngokungcono ngesakhiwo sayo sesinyithi kunye nensimbi yokulandela umgca.
Kwaye ubuchwepheshe bethu obutsha obuthambileyo be-nitriding kwindandatho yangaphakathi nangaphandle kunye nekheji eyenza ukusebenza okungcono kunye nobomi obude beebheringi zethu.
Isiqubulo siza apha
Ukuba nguNye uphawu kuShishino lokuThwala kwihlabathi liphela
Yakha ishishini elidumileyo kwihlabathi kunye nokudala uphawu oluphezulu lwenotshi yase China
Ngamaxesha onke unyanzelisa umgangatho ophezulu, ukuchukumisa kunye nexabiso elifanelekileyo
1. Zonke iinkqubo zokuvelisa, ezinje ngokuqinisa, ukujika, ukunyanga ubushushu, ukusila, ukuhlanganisa kunye nokupakisha, kugqityiwe kwimveliso yethu. Kungenxa yoko le nto i-XRL Bearing inokubonelela ngokuchanekileyo ngebhola kunye neebheringi ezijikelezayo ngamaxabiso asezantsi kwaye zinokudibana nokuhanjiswa ngexesha.
2.As i ISO9001: 2000 umenzi eqinisekisiweyo, siye saseka inkqubo traceability imveliso. Ngaphandle koko, i-XRL Co., ineqela lezobuchwephesha elinamandla kunye nejineli yaseJapan ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ekusetyenzisweni nasekusebenziseni iibheringi zethu.
Sinikezela uluhlu olupheleleyo iibheringi kubandakanya iibheringi mqengqeleki Tapered, iibheringi mqengqeleki ibhola, iibheringi umqamelo block, iibheringi mqengqeleki zezindlu, iibheringi mqengqeleki ukulenza, ukulenza iibheringi ukulenza, Wheel hub iibheringi kunye nabanye.
Kutheni ujongana nathi?
1. Sinezixhobo zovavanyo lodidi lokuqala lokufumana iiparameter ezahlukeneyo zedatha kunye nokulawula umgangatho wokuthwala.
2. Sinezakhono zethu ze-R & D, ukunceda abathengi basombulule ingxaki yeebheringi ezingaqhelekanga.
Apho sithumela ngaphandle?
Ngaphandle kwentengiso yasekhaya, i-XRL ethwele sele ithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-120 nakwimimandla yaphesheya kubandakanya iJapan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, United States, Canada, Mexico njl.